China Screw Udidi Valve for API6A umgangatho mveliso kunye nabenzi | Cepai
Imigangatho yezivalo zodaka zihambelana ne-API 6A 21th Edition, kwaye zisebenzisa izixhobo ezifanelekileyo zenkonzo ye-H2S ngokomgangatho we-NACE MR0175.
Ivaluva zodaka ze-CEPAI, uyilo oluthembakeleyo lomsebenzi onzima kunye neemeko ezirhabaxa kwaye zenzelwe ngokukodwa iimfuno ezinzima zenkonzo yeoyile, uyilo lwethu lwevalve yodaka lunetywina elithambileyo kunye nesinyithi kwizakhiwo zetywina, ukuqhuba kabini, ukuvula ngokukhawuleza nokuvala, itywina elithembakeleyo lenza ubomi benkonzo ende, kwaye ibhonethi ingasuswa ngokulula ukukhangela izinto ezingafaniyo kunokwahlula onke amalungu evalve. Yindibaniselwano ye-CEPAI ine-flange, umanyano, isihlunu kunye nodidi lwe-welding.
Lines imigca uxinzelelo High ukuxuba
Val koxinzelelo High kusombiwa inkqubo iibhloko kwezivalo
If Ukuphindaphindwa kwezinto zemveliso
Systems Iinkqubo zokuhlanganisa imveliso • Impompo ezininzi zeevaluva zebloko
Igama Valve yodaka
Umzekelo Esisangqa Uhlobo lodaka Valve / Union Union Uhlobo Valve / Welding Uhlobo Mud Valve / Screw Uhlobo Udaka Valve
Uxinzelelo 2000PSI ～ 7500PSI
Ububanzi 2 "～ 5" (46mm ～ 230mm)
Uyilo lwebhabha edadayo
Isango elibhalwe u "T" uqhagamshelo lwesiqu sesitshixo livumela isango ukuba lihambe liye esihlalweni linika itywina elomeleleyo lokuphendula.
Ukulungisa intsimi esemgceni
Ibhonethi isuswa ngokulula kuhlolo lwangaphakathi kunye / okanye ukutshintshwa ngaphandle kokususa ivalve emgceni. Oku kuyilwa kweemvume kuvumela inkonzo ekhawulezayo nelula ngaphandle kwesidingo sezixhobo ezizodwa.
Umsebenzi onzima weebheringi
Iibheringi ezinkulu, ezinzima zomsebenzi we-roller roller kunciphisa i-torque.Unique, irabion-resistant, uyilo olunye lwesihlalo.
Indibano yesihlalo inezinto ezimbini zentsimbi ezingenayo engenayo / amakhonkco okuxhasa apho i-elastomer yomelele ibotshelelwe khona ngokusisigxina.
I-elastomer ibonelela ngokuvalwa okuqinileyo emva kokusebenzisa ixesha elide kwinkonzo erhabaxa. Iiringi zentsimbi engenasici zinomhlwa kunye nokhukuliseko olunganyangekiyo. Amakhonkco ayilelwe ngokukodwa ukuqinisekisa amandla aphezulu okudibanisa i-elastomer. Uyilo lwesahluko esinye lwenza ukuba ukubuyisela endaweni kube lula.
Ukutshixa ukulungelelana kwesihlalo
Indibano yesihlalo yenziwe yintsimbi "iqokobhe lokutshixa" elibambelela esihlalweni emazantsi evalve. Olu luyilo luqinisekisa ukulungelelaniswa kwesihlalo ngokuchanekileyo kunye nokuchasana okuncinci ukuhamba.
Umphezulu womzimba oqaqadekileyo wokunxiba umzimba amakhonkco abuyisela umva kumacala omabini esihlalo. La makhonkco andisa ubomi benkonzo yevalvu ngokufunxa ukunxiba okungagungqiyo okunokonakalisa umzimba ojikeleze indawo yokuhlala.
Ukunyuka koyilo lweziqu
I-DM 7500 isebenzisa uyilo olukhulayo lwesiqu olukhetha lodwa kwaye lukhusele imisonto ukusuka kulayini ophakathi Isiporo esonyukayo sibonisa indawo yesango.
Ilensi yesalathiso sendawo ebonakalayo
Ilensi yesalathiso sokuma esicacileyo ivumela umqhubi ukuba abone ngokulula ukuba ivelufa ivulekile okanye ivaliwe. Iilensi zesalathi zikwanceda ukukhusela imisonto yeziqu kwimozulu.
Ukupakisha kwakhona kwe-stem
Ukupakisha isiqu kungatshintshwa ngaphandle kokususa ibhonethi kwivelufa (3 "- 6") ixesha lokonga xa kunokufuneka oku kulungiswa (Qaphela: uxinzelelo lweline kunye nevalve kufuneka luyekwe ngaphambi kokwenza olu londolozo).
Uyilo lokucoca ukuhamba
Indawo yomzimba eyenzelwe ukuvumela ukuqhubeka "kokugungxula" ngokuhamba kolwelo. Eli nyathelo lithintela ivelufa ekubeni "isanti phezulu", kwanofakelo lombhobho omileyo.
Egqithileyo Ngesanti kubunzulu baphantsi Operated Gate Valve
Okulandelayo: Iqhekeza ezimbini zokwenza ivalve yebhola edadayo
Abavelisi beeValve zodaka
Ukwandisa ngokusebenzisa i-Value Gate Valve ye-API6A ...